महारानी : DREAMS Magazine
February 3, 2014 , by Richa Bhattarai, Leave your thoughts
र एकदिन, अझ भनौं एक रात, त्यो पुल भाँचियो । रातभरि पहिरो गाको रे । मुर्दा जस्तो निदाउने म, केही पत्तो पाइनँ । आमाले चाहीँ धर्ती फुट्यो भन्ठान्नु भएको रे । बिहानै सुन्ने बित्तिकै कुदेर पुलछेउ पुगेँ । यहाँ पुल पनि थियो के त ! जस्तो भाको रैछ । अरु बोलिरहेका थिए, मेरो मगजमा केही घुसेन । म पिरले रन्थनिएँ – अब कसरी स्कुल जानु ? स्कुल जानु नपरे त खुब रमाउथें नि, तर त्यहाँ नगई तिमीलाई कसरी भेट्नु ? अर्को पुल थियो छ घण्टा पर्तिर । बिचमा बस्ती भए पो पुल हुनु !
को र कहिले भनेर सोध्ने होस पनि भएन मलाई । यत्ति थाहा थियो, बिहे भए अरु केटीजस्तै शहर पुग्छे, मैले नदेख्ने-नभेट्ने ठाउँमा । त्यहाँबाट बोलाएर ल्याउने न मसँग शक्ति हुन्छ, न समय । अनि मलाई जेरी ल्याएर ख्वाउने को, बालुवा घर बनाउँदै भत्काउँदै खेल्ने को ?
कोही त साँझ परिसक्यो भनेर टालटुल पार्न खोज्दैथे, मैले कहाँ मान्थेँ र । तान्दै घचेट्दै बाल क्लबका सबैलाई तिम्रा आँगनमा पुर्याँएँ । हुन त हामीनपुग्या भा नि बा आमालाई तिमीले हत्तु पारेकी रैछौ । टाउको भित्तामा बजारेर रगतपच्छे बनाएकी रैछौ, बिहा गर्नु भन्दा त मर्छु भनेर माटोको ढिस्कोबाट फाल हाल्दा खुट्टा पनि भाँचिछौ । बा-आमा न हुन्, मन पग्ल्यो, छोरीको दुर्दशा कति दिन देख्न सक्थे र । हामीले तेत्ति सम्झाउन नि परेन, सहजै माने, बाले त भनि दिए, “अब बिहा गर्छु भने नि गर्दिदैनौं, लगाओस् उसकै कितापलाई माला !”
Send us your comments/suggestions: feedback@mydreamsmag.com
Tags: Nepali Fiction, Nepali Literature, Nepali Story, Nepali Writing